Paarlaamaan Sanbata Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministeraa godhee filata - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Paarlaamaan Sanbata Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministeraa godhee filata
Paarlaamaan Sanbata Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministeraa godhee filata
Manni Maree Itoophiyaa (paarlaamaan) Sanbata dhufu Dr Abiyyi Ahmadiin Muummicha Ministera Itoophiyaa godhee akka filatu beekame.
Wolgahii paarlaamaa Sanbataa irratti, akka seera bulmaata ADWUI’tti, namni kaadhimamaa ta’ee dhiyaatu dura taa’aa ADWUI’ti. Paarlaamaa ADWUI’n dhuunfate keessatti carraan dorgomaan biraa as bayuu dhiphaadha. Kana jechuun Dr. Abiyyi akkuma salphatti muummicha ministeraa ta’ee filatama jechuudha. Paarlaamaa keessatti yaadni mormii ykn qeeqni, keessattu worra TPLF irraa, dhagayamuu mala. Garuu, Dr Abiyyi deeggarsa miseensota paarlaamaa OPDO fi ANDM guddaa waan qabuuf carraan filatamuu irraa isa gufachiisuu hin jiru.
Dr Abiyyi dura taa’aa ADWUI ta’ee kan filatame dhuma wolgahii mana maree ADWUI kan torbaan tokkoof geggeeffamaa ture irratti. Iddoo dura taa’aa kanaaf, Dr Abiyyiin alatti, kaadhimamaa ta’anii kan dhiyaatan Shifarraa Shuguxee fi Dabratsiyoon Gabramikaa’el. Garuu Abiyyi morkattoota isaa sagalee guddaadhaan moo’achuu danda’eera. Haaluma kanaan filannoo kana irratti Dr Abiyyi sagalee 108 kan argate yoo ta’u, Shifarraa fi Dabratsiyoon wolduraa duubaan sagalee 59 fi 2 argataniiru.
Filatamuun Dr Abiyyi ummata biyyattii biratti gammchuu fi abdii jijjiirama uumeera.
Dr Abiyyii fi Oromoo hundaan baga gammaddan jenna.
Previous articleOsoo hin dhihin garee Lammaa Magarsaa afaan Komaand Poostiitii buusuu qabna
Next articleDr. Abiyyi Ahmad hoogganoonni paartilee mormitootaa sagantaa muudama isaa irratti akka argamaniif affeere